China Felt Tensioner, Felt Auto Guide, Shower ထုတ်လုပ်သူ
ဖေါ်ပြချက်:Tensioner ခံစားရတယ်,အော်တိုလမ်းညွှန်ခံစားရတယ်,ရေချိုးခန်း ,Head Box ,Wiper Blade ကို,Doctor Blade
Home > ထုတ်ကုန်များ > စက္ကူစက်အပိုပစ္စည်းများ
စက္ကူစက်အပိုပစ္စည်းများ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Tensioner ခံစားရတယ်, အော်တိုလမ်းညွှန်ခံစားရတယ် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ရေချိုးခန်း R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
စက္ကူစက်မှုတစ်ခုတည်းသံမဏိ SC100 ဆလင်ဒါမှို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူလုပ်စက် Cylinder မှိုစက္ကူစက်များများအတွက်ဟောင်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အိမ်သာစက္ကူအတွက် Circular Mesh တစ်ခုတည်း Cylinder မှို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Kraft Paper Machine အတွက် 304 SS Cylinder မှို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူစက် String Chip အမျိုးအစားဆလင်ဒါမှို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူစက်မှုတ်စက်စနစ်အတွက်နှာခေါင်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူပျော့ဖတ် Shower လုပ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Pulper 314/316 အက်စ်အက်စ်ရေပန်းနှင့်ဆေးရည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူစက်အဝတ်လျှော်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူစက်ရုံအတွက်သံမဏိရေချိုးခန်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူစက်အတွက်ဆရာဝန် Blade ကို Holder  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူစက်များအတွက်ဝါယာကြိုး / ခံစားမှုအလိုအလျှောက်တင်းမာမှု Controller  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူစက်များအတွက်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ရေးခံစားမှု Stretcher  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူစက်များအတွက်နယူခံစားရတယ်တင်းမာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ခံစားရတယ် Tensioner  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Pulping အစိတ်အပိုင်းများအလိုအလျောက်လမ်းညွှန်စက်များခံစားရတယ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဝါယာကြိုးနှင့်ခံစားခဲ့ရအော်တိုလမ်းညွှန်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူစက်များတွင် Autoguide  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူပြုလုပ်ခြင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် Tube အမျိုးအစား Stretcher လမ်းပြ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူပြုလုပ်ခြင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဆလင်ဒါအမျိုးအစားလမ်းညွှန်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သံမဏိဆရာဝန်ဓါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူစက်မှုတစ်ခုတည်းသံမဏိ SC100 ဆလင်ဒါမှို
စက္ကူစက်မှုတစ်ခုတည်းသံမဏိ SC100 ဆလင်ဒါမှို စက္ကူစက်မှုတစ်ခုတည်းသံမဏိ SC100 ဆလင်ဒါမှိုဖော်ပြချက် စက္ကူပြုလုပ်ရန်စက်အတွက်ဆလင်ဒါမှိုသည်အလယ်ပိုင်းအချင်းကိုယ်ထည်၊ HT150 ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၊ သံမဏိဘားနှင့်ခါးပတ်၊ အပြင်ဘက်အချင်း ၁၅၀၀...
စက္ကူလုပ်စက် Cylinder မှိုစက္ကူစက်များများအတွက်ဟောင်း
စက္ကူလုပ်စက် Cylinder မှိုစက္ကူစက်များများအတွက်ဟောင်း စက္ကူစက္ကူ Mills ကအတှကျအစက် Cylinder မှိုဟောင်းများပြုလုပ်ခြင်း၏အဓိကအက္ခရာ: အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုမှုအမျိုးအစား - စက္ကူပြုလုပ်ရာတွင် Cylinder မှို၊ ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းပုံအမျိုးအစား: ဘုံ,...
အိမ်သာစက္ကူအတွက် Circular Mesh တစ်ခုတည်း Cylinder မှို
အိမ်သာစက္ကူအတွက် Circular Mesh တစ်ခုတည်း Cylinder မှို အိမ်သာစက္ကူအတွက် Circular Mesh တစ်ခုတည်း Cylinder မှို ၏အဓိကလက္ခဏာ ။ အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုမှုအမျိုးအစား - စက္ကူပြုလုပ်ရာတွင် Cylinder မှို၊ ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းပုံအမျိုးအစား: ဘုံ,...
Kraft Paper Machine အတွက် 304 SS Cylinder မှို
Kraft Paper Machine အတွက် 304 SS Cylinder မှို 304 အက်စ်အက်စ် Cylinder မှိုဖျေါပွခ ကျြ စက္ကူပြုလုပ်ရန်စက်အတွက်ဆလင်ဒါမှိုသည်အလယ်ပိုင်းအချင်းကိုယ်ထည်၊ HT150 ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၊ သံမဏိဘားနှင့်ခါးပတ်၊ အပြင်ဘက်အချင်း ၁၅၀၀ မီလီမီတာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။...
စက္ကူစက် String Chip အမျိုးအစားဆလင်ဒါမှို
စက္ကူစက် String Chip အမျိုးအစားဆလင်ဒါမှို စက္ကူစက် String Chip Type Cylinder မှို အဓိကဇာတ်ကောင် - အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုမှုအမျိုးအစား - စက္ကူပြုလုပ်ရာတွင် Cylinder မှို၊ ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းပုံအမျိုးအစား: ဘုံ, လေထုပင်ပန်းနွမ်းနယ်, လေဟာနယ်။...
ထုပ်ပိုး: Paperboard Box နှင့်သစ်သား Box
Supply နိုင်ခြင်း: 10000 pieces/year
စက္ကူစက်မှုတ်စက်စနစ်အတွက်နှာခေါင်း 1.The nozzle ဖော်ပြချက် nozzle များအသုံးပြုခြင်းသည်စက္ကူစက်ရုံများမှထုတ်လုပ်သောစက္ကူ၏အရည်အသွေး၊ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအဖုံးအမျိုးမျိုး၏သက်တမ်းနှင့်ရေသို့မဟုတ်ဓာတုပစ္စည်းများသုံးစွဲခြင်းကိုတိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်သည်။ nozzle...
စက္ကူပျော့ဖတ် Shower လုပ်
စက္ကူပျော့ဖတ် Shower လုပ် 1.The စက္ကူပျော့ဖတ် Shower ဖော်ပြချက် Papermaking လှိုရေမှုန်ရေမွှားပိုက်ကို roller မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးအတွက်စက္ကူစက်ဘောင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။...
Pulper 314/316 အက်စ်အက်စ်ရေပန်းနှင့်ဆေးရည်
Pulper 314/316 အက်စ်အက်စ်ရေချိုးခန်းနှင့် nozzle 1.The Pulper 314/316 အက်စ်အက်စ်ရေချိုးခန်းနှင့် nozzle ဖော်ပြချက် စက္ကူပြုလုပ်ခြင်းအဝတ်လျှော်ရေပန်းကိုစက္ကူစက်ဘောင်ပေါ်တွင် roller မျက်နှာပြင်အားသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်တပ်ဆင်ထားသည်။...
စက္ကူစက်အဝတ်လျှော်စက် 1. စက္ကူစက်အဝတ်လျှော်စက် ဖော်ပြချက် roller မျက်နှာပြင်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အတွက် Shower For Paper Plant နှင့်စာလိပ်၏အတွင်းပိုင်းကိုစက္ကူခြမ်းမှဂျက်ဂျက်ပြွန်ဖြင့်သီးခြားခွဲထုတ်ပြီးပျော့ဖတ်ကိုစွန်းထင်းခြင်း၊ roller...
စက္ကူစက်ရုံအတွက်သံမဏိရေချိုးခန်း 1. စက္ကူစက်ရုံဖော်ပြချက်သည်ရေချိုးခန်း ရေချိုးခန်းကို roller မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးအတွက်စက္ကူစက်ဘောင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီး၊ လိပ်၏အတွင်းပိုင်းကိုစက္ကူခြင်မှဂျက်ဂျက်ပြွန်ဖြင့်သီးခြားခွဲထုတ်ထားသည်။...
စက္ကူစက်အတွက်ဆရာဝန် Blade ကို Holder
Supply နိုင်ခြင်း: 20000 meters/year
刀架墨刀架 合理的墨刀技术技术在工业加工应用应用非常 重要 。 合理的刀刀远远超出超出了了刮墨墨墨刀刀刀的 选择选择范围 。 刮板夹具夹具也 1 重要重要 能够能够能够超出 了墨墨墨刀 15 墨 范围 。 夹具夹具也重要重要。 15 能够 了超出墨墨刀刀刀 15 15 10 夹具非常。 夹具能够能够合理能够 墨刀 ။ 粘附在滚筒上။ 在一定程度上,它可以接受并适应辊子表面的不平整။ 可以根据不同的热膨胀程度进行调整,以方便频繁更换刀片။...
စက္ကူစက်များအတွက်ဝါယာကြိုး / ခံစားမှုအလိုအလျှောက်တင်းမာမှု Controller
Supply နိုင်ခြင်း: 10000 mets/year
线 / 毡自动张力控制器 使用电力应变， 过载保护，， 维护少， 张力大大 完全密封。。 运行可靠， 位置位置，， 电子方向可调； 张力传感器检测检测检测毡的的的的的的张力张力张力张力检测的的张力张力的密封5的的密封。的的的的张力的的的的的的的的的的张力张力的张力张力5的 ，， 电信号电信号；； 张力控制器接收接收信号其其转换为由监视器输出的实际时时时能力。。。。。。。。计算计算。时时计算计算计算计算电信号5电信号； 电信号；； 。。。电信号。。。。。。。。。。。。张紧。张紧။...
Stretcher-Paper Machine အလိုအလျှောက်ထိန်းချုပ်ထားသောအပိုင်းများ အားသာချက်: စောင် / ဝါယာကြိုး - အဘို့အလိုအလျှောက်တင်းမာနေ။ ၎င်းသည်တက်ကြွသောဘက်၊ passive ဘက်၊ ချိတ်ဆက်ထားသောလှံတံ၊ မော်တာနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။...
စက္ကူစက် - စက္ကူစက်အပိုပစ္စည်းများအတွက် Pneumatic ခံစားချက်တင်းမာ 1 အမျိုးအစား ဘယ်ဘက်စက်2ပြွန်ပေါ်တွင်ရွှေ့ပြောင်း tile ၏အချင်း 110mm (လိုအပ်သောရက်စွဲ)3လမ်းညွှန်ပြွန်၏ပစ္စည်း သံမဏိပြွန်4ဝါယာကြိုးပစ္စည်း အစွန်းခံသံမဏိ အရစ်ကျ၏အပေါက်အစေး...
စက္ကူစက်မှုလုပ်ငန်း - စက္ကူစက်အပိုပစ္စည်းများအတွက် Felt Tensioner HUATAO သည်စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့သည် စက္ကူစက်တွင် ဦး ခေါင်း Box ကို စက္ကူစက်၏အပိုပစ္စည်းများ Wiper Blade ကို Doctor Blade စာလိပ်နှင့်ကျောက်လိပ်ကိုနှိပ်ပါ အပိုင်းလိပ်...
Pulping အစိတ်အပိုင်းများအလိုအလျောက်လမ်းညွှန်စက်များ - စက္ကူစက်အပိုပစ္စည်းများခံစားခဲ့ရသည် အလိုအလျောက်လမ်းညွှန်သတ်မှတ်ချက်များခံစားခဲ့ရသည်...
ဝါယာကြိုးနှင့်ခံစားခဲ့ရအော်တိုလမ်းညွှန်စက် - စက္ကူစက်အပိုပစ္စည်းများ အော်တိုလမ်းညွှန်စက်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ ဝါယာကြိုးနှင့်ခံစားမှုအလိုအလျောက်လမ်းညွှန်စနစ်များသည်ဝါယာကြိုးကိုလည်ပတ်နေသည့်လိပ်ခေါင်းအလယ်တွင်ပုံမှန်လည်ပတ်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။...
စက္ကူစက်စက် - စက္ကူစက်အပိုပစ္စည်းများတွင် Autoguide အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ Felt နှင့် Wire Auto လမ်းညွှန်စနစ်များသည် ၀ ိုင်ယာကြိုးကိုသူလည်ပတ်နေသည့်အလယ်ဗဟိုတွင်ပုံမှန်လည်ပတ်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။...
စက္ကူပြုလုပ်ခြင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် Tube အမျိုးအစား Stretcher လမ်းပြ
စက္ကူပြုလုပ်ရာတွင်စက်နှင့်စက္ကူစက်အပိုပစ္စည်းများအတွက် Tube Type Stretcher လမ်းညွှန် Huatao သည်အပိုင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့ခြင်းအပိုင်းအတွက်ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် strecher များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ Electric Tensioner (Electric Tensioner, Electric...
စက္ကူပြုလုပ်ခြင်းစက်မှုလုပ်ငန်း - စက္ကူစက်အပိုပစ္စည်းများအတွက်ဆလင်ဒါအမျိုးအစားလမ်းညွှန် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ ဆလင်ဒါအမျိုးအစားလမ်းညွှန် 1. အလိုအလျောက်ပြန်လည်သတ်မှတ် 2.Multi-directional တပ်ဆင် စက္ကူစက်ရုံအတွက်အခြားအပိုပစ္စည်းများ: Tensioner...
Supply နိုင်ခြင်း: 6000 pcs per year
သံမဏိဆရာဝန် Blade-Paper စက်အပိုပစ္စည်းများ အက်စ်အက်စ်ဆရာဝန် Blade ၁။ အဓိကအသုံးပြုမှု။ စာလိပ်၌ကျောက်တုံးများနှင့် Ebonite လိပ်များအတွက်သင့်လျော်သည်။ အဓိကအင်္ဂါရပ်များ - ပိုမိုခိုင်ခံ့မှု၊ ပိုကောင်းသောခြစ်ခြင်းရလဒ်၊ Phosphor ကြေးဆရာဝန် Blade ကို ၂...
တရုတ်နိုင်ငံ စက္ကူစက်အပိုပစ္စည်းများ ပေးသွင်း
HUATAO GROUP သည်စက္ကူစက်အမျိုးမျိုးအစိတ်အပိုင်းများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတွင် Felt Tensioner၊ Felt Auto Guide၊ Shower, Head box၊ Wiper Blade၊ Doctor Blade, Press roll and stone rolls၊ Section roll, Cylinder mold တို့ပါဝင်သည်။
Tensioner ခံစားရတယ် အော်တိုလမ်းညွှန်ခံစားရတယ် ရေချိုးခန်း Head Box Wiper Blade ကို Doctor Blade Polyester ခံစားရတယ် ခံစားရတယ်